ချစ်ရတဲ့အဖေဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးကို သတိတရနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း – Cele Posts
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်း ကတော့ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝလေးကို ရရှိပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ပျက်တွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေ ကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို အားပေးချစ်ခင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ နှစ်ယောက်ကို ပိုပြီး လူသိများစေတဲ့ ကိစ္စကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်ကို ပေါင်ပြီး ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းတွေ ကို ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ မိဘတွေနဲ့ ပြန်လည် ပြေလည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းမှ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ ကတော့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း ဖခင်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးမှာ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် ဖခင်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ပို့စ်အောက်တွင်လည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ သူငယ်ချင်းများမှလည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။
” သားအတွက် ထာဝရ. အမိုး ထာဝရအရိပ်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ Happy Birthday. ဖေဖေ🥰 ” လို့ ရေးသားပြီး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစာလေးတွေ ရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီသတင်းလေးကို အခုပဲ တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ခဈြရတဲ့အဖဖွေဈသူရဲ့ မှေးနမှေ့ာ အမှတျတရမှေးနဆေု့တောငျးစကားလေးကို သတိတရနဲ့ဆုတောငျးပေးလိုကျတဲ့ ပိုငျဇရေဲထှနျး
သရုပျဆောငျ ပိုငျဇရေဲထှနျး ကတော့ ခဈြရတဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ ဘဝလေးကို ရရှိပိုငျဆိုငျ ထားတာ ဖွဈပါတယျ။ နာမညျပကျြတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ တဈခြို့ ပရိသတျတှေ ကတော့ သူတို့ နှဈယောကျကို အားပေးခဈြခငျနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျဇရေဲထှနျးတို့ နှဈယောကျကို ပိုပွီး လူသိမြားစတေဲ့ ကိစ်စကတော့ ဖခငျဖွဈသူ ပိုငျဆိုငျတဲ့ အိမျကို ပေါငျပွီး ငှကွေေးအရှုပျအရှငျးတှေ ကို ရှငျးပေးခဲ့တဲ့ ပွသနာဖွဈပါတယျ။
အခုခြိနျမှာတော့ မိဘတှနေဲ့ ပွနျလညျ ပွလေညျသှားပွီဖွဈကွောငျး ပိုငျဇရေဲထှနျးမှ ဆိုပါတယျ။ ဒီနေ့ ကတော့ ပိုငျဇရေဲထှနျး ဖခငျရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေး ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမေ့နကျပိုငျးလေးမှာ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျတှငျ ဖခငျရဲ့မှေးနအေ့တှကျ ဆုတောငျးပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ပို့ဈအောကျတှငျလညျး ပိုငျဇရေဲထှနျးရဲ့ သူငယျခငျြးမြားမှလညျး မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားပါသေးတယျ။
” သားအတှကျ ထာဝရ. အမိုး ထာဝရအရိပျနောငျနှဈပေါငျးမြားစှာအထိ Happy Birthday. ဖဖေေ🥰 ” လို့ ရေးသားပွီး ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ကဲ ပရိသတျကွီးလညျး ပိုငျဇရေဲထှနျးရဲ့ ဖခငျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးစာလေးတှေ ရေးသားပေးခဲ့ကွပါဦးလို့ တိုကျတှနျးရငျး ဒီသတငျးလေးကို အခုပဲ တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။
ုသူမရဲ့မေမေက မွေးနေ့မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ အမှတ်တရစကားလေးကြောင့် ရင်ထဲမှာကြည်နူးဝမ်းသာနေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်